FWP1. အစားအသောက် အဆိပ်ဖြေ သန့်စင်စက်၊ အဆိပ်အတောက်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓါတ်မြေ – SHWEMall
Makeup & Accessories Box
Home › FWP1. အစားအသောက် အဆိပ်ဖြေ သန့်စင်စက်၊ အဆိပ်အတောက်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပို့မွှေားများ ကို Active Oxygen ဖြင့် သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးသည်၊ Active Oxygen ဖြင့်ဆေးသော်လည်း အဟာရထိန်းထားပေးသည်၊ 10Lဝင်ဆန့်သည်_HAKABL0010
FWP1. အစားအသောက် အဆိပ်ဖြေ သန့်စင်စက်၊ အဆိပ်အတောက်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပို့မွှေားများ ကို Active Oxygen ဖြင့် သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးသည်၊ Active Oxygen ဖြင့်ဆေးသော်လည်း အဟာရထိန်းထားပေးသည်၊ 10Lဝင်ဆန့်သည်_HAKABL0010
Ks 38,000 Ks 38,000
Default Title - Ks 38,000 MMK Quantity
FWP1. အစားအသောက် အဆိပ်ဖြေ သန့်စင်စက်၊ အဆိပ်အတောက်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပို့မွှေားများ ကို Active Oxygen ဖြင့် သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးသည်၊ Active Oxygen ဖြင့်ဆေးသော်လည်း အဟာရထိန်းထားပေးသည်၊ 10Lဝင်ဆန့်သည်
3L DeSugar Rice Cooker HeDaChu- ကစီဓါတ်လျှော့ ထမင်းပေါင်းအိုး
Sale price Ks 48,000 Ks 48,000 Save Ks 16,000
5 L DeSugar Rice Cooker HeDaChu- ကစီဓါတ်လျှော့ ထမင်းပေါင်းအိုး
Sale price Ks 55,500 Ks 55,500 Save Ks 18,500
DPR2. Soap/ HAND GEL Dispenser with SENSOR, လက်လေးခံလိုက်ယုံနဲ့ ဆပ်ပြာမြုပ်ထွက်၊ BATTERY_ HAKAWP00010
Regular price Ks 15,000 Ks 15,000
ECR2. Green Multi Electric Cooker_HAKACA0006-7
Regular price Ks 38,000 Ks 38,000
FUNCTION 8 မျိုးပါ ရေခဲကြိတ် ပဲနို့ ကျိုကြိတ် Heating BLENDER_HBLEG003 (RD|BE)
Regular price Ks 160,000 Ks 160,000
SHWEMall: Bringing the shopping mall to you
© 2022 SHWEMall